Keewwatawwan tarree keessaa maraaf dhangii rasaasaa yookin lakkaawwii tokkicha fayyadamuuf, keewwatoota mara fili, Dhangii - Rasaasawwanii fi Lakkaawwii filadhu, kana booda dhangii irra cuqaasi.
Akkasuumas, tarree lakkoofsifaman yk rasaasaman gulaaluuf, ajajoota kamshaa Rasaaswwanii fi Lakkaawwii irraa fayyadamuu nidandeessa. Dhangii Lakkaawwii yk rasaasaa jijjiiruuf, sajoo Rasaasawwanii fi Lakkaawwii cuqaasi.
Akkaataaleen Keewwataa, lakkaawwii isa ati galmee keessatti fayyadamtu irratti too'annaa gaarii siif latu.
Sanduuqa Akkaataalee Lakkaawwii keessaa, akaakuu lakkaawwii isa fayyadamuudhaaf barbaaddu fili.
Keewwatawwan warra akka lakkaawwiitti ida'amuu barbaadduuf akkaataa fayyadami.
Lakkaawwii Tarree Lakkaawwii Keessati Foyyeessi
Title is: Lakkaawwii fi Akkaataalee Lakkaawwii